टच स्क्रीन भिडियो फोन वरिष्ठका लागि - Konnekt
अविश्वसनीय सरल भिडियो फोन
यो Konnekt टच स्क्रिन भिडियो फोनले तपाईलाई उच्च-गुण ल्याउँछ, अनुहारको सामना दुई-तर्फी भिडियो र ध्वनिको साथ कल गर्दै। यो एक समर्पित उपकरण हो जुन प्रयोग गर्नको लागि अविश्वसनीय सरल, अत्यधिक व्यक्तिगत र विश्वसनीय छ।
यो छ अविश्वसनीय सरल! एक टेलिफोन वा टिभी भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो, धेरै ठूलो, र एक लामो मा एक मुस्कान र कुराकानी गर्न को लागी ठूलो।
तपाईंको परिवार र साथीहरूले विश्वव्यापी रूपमा तपाईं उनीहरूको मोबाइल, आईप्याड, ट्याब्लेट, पीसी, म्याक, अर्को भिडीफोन, वा कुनै पनि उपकरण जुन सित्तैमा स्काईप अनुप्रयोग चलाउँछन् भेटेर कुरा गर्न सक्दछ।
एक विशेष अवसर मा एक अर्को आश्चर्यचकित, आफ्नो दिन मा एक मुस्कान ल्याउन, वा बस सँगै समय साझा - को यात्रा को आवश्यकता को बिना सबै।
नियमित टेलिफोन पनि कल गर्नुहोस्
तपाईं कुनै पनि घरेलु "ल्याण्डलाइन" फोनमा र विदेशमा लगभग कुनै पनि ल्यान्डलाइनमा भ्वाइस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सम्पर्कहरू जहिले-जहिले तपाईं चाहानुहुन्छ, कुरा गर्नुहोस्। कलहरू असीमित छन्। तपाइँले फेरि कहिले पनि मिनेट सकियो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन।
बहु ब्याकअप नम्बरहरू
निराश बिना तपाईंको सम्पर्कहरू भेट्टाउनुहोस् र पुग्नुहोस्! हामीले प्रत्येक कल बटन तपाईले छनौट गरेको तरीकामा सेटअप गर्दछौं - उदाहरण को लागी, पहिले आमने सामने सम्पर्कको प्रयास गर्न को लागी (सम्पर्कको मोबाइल, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा), त्यसपछि तिनीहरूको कार्यालय, र अन्तमा उनीहरूको घरको फोन।
तपाईको समयलाई खोज्न र बिभिन्न नम्बरहरू वा सम्पर्कहरूको प्रयास गर्न खर्च गर्न आवश्यक पर्दैन ... Konnekt टच स्क्रीन भिडियोफोन तपाईको लागि गर्छ।
हामी यसलाई भ्वाइसमेल र उत्तर मेशिनहरू रोक्नको लागि सेटअप गर्न सक्दछौं ह्या hanging्गिंग र पुन: प्रयास गरेर, वा तपाईंको नम्बरको भ्वाइसमेल उत्तरहरूको ठीक अगाडि अर्को नम्बरमा सरेर।
भिडियोहरू फोनमा साझेदारी गर्नुहोस्
साझा गर्नुहोस् र सजिलैसँग तपाईंको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्झनाहरूका बारे कुरा गर्नुहोस्! साथी र परिवारले तपाइँको फोटो, स्लाइड शो, वेब चित्रहरू वा उनीहरूको कम्प्युटर स्क्रिनमा भएका लगभग केहि पनि देखाउन कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो कल गरीरहेको बेला तपाईको टच स्क्रिन भिडियो फोनमा देखिन्छ जब तपाई कुरा गरिरहनु भएको छ - चाहे उनीहरू विश्वभरि आधा मार्गमा नै भए। भिडिओफोन प्रयोगकर्ताले केही गर्नुपर्दैन ... पछाडि बस्नुहोस्, शोको मजा लिनुहोस् र ती जादुमय क्षणहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
आमने सामने, ध्वनि र भिडियोको साथ उच्च-गुणवत्ता कल
मोबाइलहरू, आईप्याडहरू, ट्याबलेटहरू, कम्प्युटरहरू, स्काईपको साथ कुनै पनि उपकरण कल गर्दछ
नियमित ल्याण्डलाइन्स पनि कल गर्दछ
निराश बिना सम्पर्कहरू फेला पार्छ: कल ब्याकअप नम्बरहरू
हामी भ्वाइसमेल / उत्तर मेशिनबाट बच्न यसलाई सेट अप गर्न सक्छौं
कुनै पनि नम्बर वा प्रयोगकर्तानाम याद गर्न आवश्यक छैन
कुनै पनि कम्प्युटरबाट भिडियो फोनमा फोटोहरू साझेदारी गर्नुहोस्
बटनहरू हेर्न सजिलो